Nhau - Zviitiko zvinokanganisa Kuneta Simba reSeamless Simbi Tube Zvishandiso
Ruvara Rakafukidzwa Sheet
Hot Dip kwakakurudzira Steel Plate
Yakagadzirwa kwakakurudzira Simbi Sheet
Yakarurama Welded Pipe
Carbon Simbi Coils
Hot Yakakungurutswa Simbi Coils
Cold Yakakungurutsirwa Plate Kugadzira
Zvimwe Simbi Zvigadzirwa
Zviitiko Zvinochinja Kuneta Simba reSeamless Simbi Tube Zvishandiso
Kuneta kwesimba risina musono simbi chubhu kubva kuShandong Derunying inonyanya kujeka kune akasiyana ekunze uye emukati maficha, mune ekunze zvinhu zvinosanganisira chimiro, saizi, pamusoro kutsetseka, uye sevhisi mamiriro kana akafanana ezvikamu, uye zvemukati zvinhu zvinosanganisira kuumbwa, kugadzirwa, kuchena, kusara kwekushushikana uye nezvimwe zvinhu zvacho pachazvo. Shanduko dzisinganzwisisike dzeizvi zvinhu dzinokonzeresa kuchinja kana kunyange musiyano wakakura mukuneta kuita kwezvinhu.
Iko kukanganisa kwezve zvinhu pane kuneta simba chinhu chakakosha chekuneta kwekutsvaga. Uku kutsvagurudza kunobatsira mukuumbwa kwezvakakodzera zvikamu zvezvikamu, kusarudzwa kweakanaka musono simbi chubhu zvinhu uye kuumbwa kweakasiyana manzwiro echando uye anopisa ekugadzirisa matekinoroji, nokudaro kuve nechokwadi chakanyanya kuneta kuita kwezvikamu.
1. Iko kushushikana kwekushushikana mupfungwa
Zvekare, kuneta simba kunowanikwa kuburikidza nechiyero uchishandisa yakatsetseka yakatsetseka sampuro. Nekudaro, notches dzakasiyana, senge matanho, makiyi, tambo, uye maburi emafuta nezvimwe, zvinongovapo mune chaiwo mamishini zvikamu. Kuvapo kweaya notches kunokonzeresa kushushikana, izvo zvinoita kuti kunyanya kunetsekana pamudzi wechikoti kuve kwakakura kupfuura iko kunetseka kunotakurwa nechikamu, uye kazhinji kunotanga kutadza kuneta kwechikamu.
Dzidziso yekusimbisa kushushikana kweyakaenzana Kt: chiyero cheiyo yakanyanya kunetsekana kune yezita rekushushikana pamudzi weiyo notch yakawanikwa zvinoenderana neyakagadziriswa dzidziso pasi pemamiriro ezvinhu akasimba.
Inobudirira kushushikana kwekumanikidza kukosheswa (kana kuneta kushushikana kusunganidzwa kwekukwana) Kf: chiyero chemugumo wekuneta σ-1 yemuenzaniso wakatsetseka kune iyo yekuneta muganho σ-1n weiyo notch sampuro.
Iyo inoshanda yekumanikidza kushushikana koefficient inokanganiswa kwete chete nehukuru uye chimiro chechinhu chacho, asi zvakare nemamiriro epanyama echinhu, kugadzirisa, kupisa kupisa nezvimwe zvinhu.
Iyo inoshanda yekumanikidza yekusimbisa coefficient inowedzera neiyo notch kupinza, asi inowanzo kuve diki pane iyo yeoretical kusagadzikana kwevasungwa coefficient.
Kuneta notch senitivity coefficient q: the fatigue notch sensitivity coefficient inoratidza hunyoro hwezvinhu kune kuneta notch uye kunoverengerwa neinotevera fomula.
Iyo data renji ye q ndeye 0-1, uye idiki iri q, iyo isinganetsi ndiyo isina musono simbi chubhu yezvinhu kune notch. Ongororo dzinoratidza kuti q haisi yekungogara iri yezvinhu, uye ichiri kuenderana nesize saizi; q haina hukama kune notch chete kana iyo notch radius iri yakakura kupfuura imwe kukosha, iyo radius kukosha kwayo kwakasiyana kune akasiyana zvinhu kana mamiriro ekugadzirisa.
2. Iko kukura kwehukuru
Nekuda kweiyo huterogeneity yekushomeka uye nekukanganisa kwemukati kwechinhu, kuwedzera kwehukuru kuchakudza mukana wekutadza kwezvinhu, nokudaro nekuderedza kuneta muganho wezvinhu. Kuvapo kwehukuru saizi inyaya yakakosha mukushandisa iyo yekuneta dhata yakawanikwa kuburikidza nekuyera kwesamu diki murabhoritari kune chikamu chehukuru chaihwo. Izvo hazvigoneke kuzere uye zvakafanana kumiririra kushushikana, iyo gradient yekushushikana kana zvimwe pane chikamu chehukuru chaihwo, saka marabhoritari mhedzisiro uye kuneta kukundikana kwezvimwe zvikamu zvakamisikidzwa neumwe neumwe.
3. Iko kukanganisa kwenzvimbo yekugadzirisa mamiriro
Makina ekumachina asina kuenzana anogara aripo pane yakagadziriswa pamusoro. Mavara aya akaenzana neteki diki dzinokonzera kushushikana pamusoro pechinhu, uye zvinoderedza kusimba kwesimba kwechinhu. Miedzo inoratidza kuti, yesimbi nealuminium alloys, iyo yekuneta muganho weakashoma machining (rough kutendeuka) yakaderera pane yeiyo longitudinal yakanaka polishing ne10% -20% kana kupfuura. Iyo yepamusoro isimba rezvinhu, iyo inonyanya kunetseka ndeye kuratidzira kumeso.
Kero: ROOM 301, WEIRUN LINJIE HOFISI BUILDING, NO. 30, HUANGHE ROAD, LIAOCHENG HIGH-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, SHANGDONG PROVINCE
Runhare: 86 + 0635-8889477